NgeMacs entsha uApple uza kudlula kwiHP kwintengiso ye- "All in One" | Ndisuka mac
Kwiminyaka emininzi ngoku, umxholo we-iMac, ikhomputha "eku-in-one"Zonke kwenyeIfashoni phakathi kweekhompyuter ezisekwe kwiWindows. Kulunge kakhulu kwaye kubhetyebhetye ukuba neyunithi esembindini kunye nazo zonke izinto zayo "ezinamathele" ngasemva kwesikrini.
Zimbini iimveliso eziinkokeli zezi khompyuter, njenge HP y lenovo. Kulungile I-DigiTimes isandula ukutsho kwingxelo ukuba iApple izakubadlula kwintengiso, emva kokuvela koluhlu olutsha lweMacs Apple Silicon.
I-DigiTimes ithumele nje a ingxelo apho iqinisekisa ukuba iapile Izakususa i-HP njengophawu oluphambili ekuthengiseni iikhompyuter ze "All in One", ngokutsho kwemithombo ekuthethwe ngayo phakathi kwabanikezeli ngeshishini kwicandelo.
Eli bango lisekwe kubungqina bokuba abavelisi beekhompyuter "ezifikelelekayo" banengxaki yokwenza iikhompyuter zabo, ngenxa ukunqongophala chip yehlabathi. Iiprosesa kunye nabavelisi be-chip babeka phambili kwimveliso yabo encinci ukuya kwiimveliso zexabiso eliphambili kwintengiso ye "All in One".
Ukungabikho kweetshipsi kuya kuchaphazela ukuthengiswa kwe "All in One"
Ingxelo ibonisa ukuba ii-AIOs eziphezulu ezifana ne- iMac Abakuqapheli ngokungabikho kwesitokhwe sezinto zabo, ngelixa inqanaba lokungena kwiimveliso eziphakathi kuluhlu lwamaxabiso phakathi kwe-500 kunye ne-1.000 yeeuros zineengxaki zokuvelisa ngenxa yokunqongophala kwamacandelo.
Ngokutsho Digitimes, I-HP yayiyeyona mveliso inkulu ye "All in One" iikhompyutha kwikota yesine yowama-2020, eneeyunithi ezingama-925.000, ilandelwa yi-Apple eneeyunithi ezingama-860.000 kunye neLenovo eneeyunithi ezingama-731.000. Nangona kunjalo, ukuthengisa kuka-Apple kuqikelelwa ukuba kugqithile kwi-HP kwikota yokuqala ka-2021.
U-Apple uthi ulindele ukuba achaphazeleke ngokunqongophala kwe-chip, eqikelela ukwehla ngokulandelelana kwe- $ 3 ukuya kwi- $ 4 yezigidigidi kwingeniso kwikota yesithathu ka-2021 ngenxa yokunqongophala konikezelo iPad Kwaye ulindele indibaniselwano yokunqongophala kwesitokhwe kunye nenqanaba eliphezulu kakhulu lokufuna zombini i-iPad kunye neMac ukuba ichaphazele ingeniso kwisiqingatha sesibini sonyaka ka-2021.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » NgeMacs entsha uApple uza kudlula kwiHP kwintengiso ye- "All in One"